Eduze namagumbi angu-6 e-Budapest, indawo yokubhukuda, i-sauna, i-jakuzzi - I-Airbnb
Eduze namagumbi angu-6 e-Budapest, indawo yokubhukuda, i-sauna, i-jakuzzi
I-Villa Idill yindlu yezivakashi e-Zebegény, eduze ne-Budapest enendawo yokubhukuda ne-panorama emangalisayo ye-Danube bend. I-Villa enefenisha inezitezi ezingu-3, amakamelo okulala angu-5, amagumbi okuhlala angu-2, izindlu zokugezela ezingu-5, amakhishi angu-2.
I-Villa Idill yindlu yezivakashi e-Zebegény, eduze ne-Budapest, enendawo yokubhukuda, i-jakuzzi, i-sauna ne-panorama emangalisayo yase-Dunakanyar. I-Villa enefenisha inezitezi ezingu-3, amakamelo okulala angu-5, amagumbi okuhlala angu-2, izindlu zokugezela ezingu-5, ikhishi elibanzi, nethala elikhulu lengadi. Isixwayiso esikhulu se-Villa sokuthi wonke umuntu angathola indawo yokuphumula, nakuba kungumndeni omkhulu noma iqembu labangane.
Indlwana nepharadesi elizungezile lilungele izingane, ngisho nabantu abadala. Wonke umuntu angaphumula ezindaweni eziningi zokuphumula. Ungachitha amaviki e-Zebegény enhle kakhulu nasezindaweni ezizungezile ngaphandle kokukhathazeka: i-Danube, i-Ipoly, i-Börzsöny, amadolobha amancane abukekayo (i-Nagmaros, i-Esztergom, i-Visegrad, i-Vac), impilo engokwesiko, izimakethe zabalimi zinikeza uhlelo oluhle kakhulu kubo bonke ubudala bamaqembu ngaso sonke isikhathi sesimo sezulu. Kodwa i-Villa nayo iqinisekisa ukuzizwa kahle, ngisho noma ungenzi lutho vele ujabulele ukuchitha isikhathi sakho nabantu obathandayo.
ubusuku obungu-7 e- Zebegény
I-Villa Idill yindlu yezivakashi e-Zebegény, imizuzu engu-50 kuphela ukusuka e-Budapest enendawo yokubhukuda, i-jakuzzi, i-sauna ne-panorama emangalisayo yase-Dunakanyar. I-Villa enefenisha inezitezi ezingu-3, amakamelo okulala angu-5, amagumbi okuhlala angu-2, izindlu zokugezela ezingu-3, ikhishi elibanzi, nethala elikhulu lengadi. Isixwayiso esikhulu se-Villa sokuthi wonke umuntu angathola indawo yokuphumula, nakuba kungumndeni omkhulu noma iqembu labangane.